I-MultiPhaseCavitator-Insert ye-Ultrasonic Flow Cell - Hielscher Ultrasound Technology
I-MultiPhaseCavitator Insert (InsertMPC48) yakhelwe ukuthuthukisa ukucubungula kwe-ultrasonic kwezingxube zamanzi / uketshezi noma uketshezi / gas. Ama-cannula ama-48 amahle kakhulu ajoza uketshezi lwamanzi noma i-gas ibe isigaba samanzi esifundeni se-cavitation. Lokhu kudala amaconsi amancane kakhulu noma ama-bubbles gesi afaka indawo ephezulu kakhulu.
Lokhu kufaka kuyasiza ikakhulukazi emulsion chemistry, njenge-Phase-Transfer-Reactions, Isigaba-Ukudlulisa-Catalysis (PTC) noma i-Liquid-Liquid-Extraction. Enye insimu yesicelo esithakazelisayo yisimiso sezinhlayiyana ezivela kumbili okuqhamuka kwamanzi noma i-sono-crystallization. Lokhu kufakwe ekwenzeni i-Hielscher flow cell reactors futhi ivumela i-batch noma ukuqhutshwa okuqhubekayo.
Amaports angama-48 nama-Injection
I-Ultrasonication iyindlela ephumelelayo ye-emulsification nokuxuba. Ngokungafani nokusetha okuvamile, lapho izigaba ezihlukene zihlanganiswa khona ngaphambi kokuba zingene esitokisini sokugeleza kanye ne-cavitation, lokhu kufaka kwe-cell cell kuthuthukisa ukuhlanganiswa kwezigaba ezimbili. Uma uketshezi olujozwayo ngama-cannulas angu-48, lungena esitokisini sokugeleza emaceleni amancane kakhulu. I-insert isebenzisa ama-cannulas ama-48 amahle kakhulu wezokwelapha ezinamamitha angaphakathi ukusuka ku-0.3mm kuya ku-1.2mm. Lezi zinhlayiya zingashintshwa kalula futhi zindleko eziphansi ezithengiwe (ezinyumba, nge-2ct / pc). I-cavitation ye-ultrasonic (ku-20kHz) inquma ama-liquid angenayo angama-48 angena amaconsi amancane lapho engena esigabeni samanzi esitokisini sokugeleza.
Umklamo usebenza ngokucindezela kokuphakelayo okufanayo kusuka kokunikezela kuwo wonke ama-canonula angu-48 ukukala ukugeleza phakathi kwama-cannulas.
Ama-port angena ema-48 abe yi-reactor ultrasonic ye-liquid-liquid reaction
Injection ibe i-multiphasecavitator ye-ultrasonic
Faka i-InsertMPC48 – Ama-cannulas amahle ama-48 aphela endaweni ye-cavitation
I-Ultrasonic Flow Cell Reactor FC100L1K-1S nge-InsertMPC48
Ukusetshenziswa kanye nezicelo
Ama-reactors ama-Hielscher ultrasonic ngokuvamile asetshenziselwa ukukhipha emulsify, ukuthuthukisa isigaba-ukudlulisa inqubo kinetics noma ukuchithwa kwamazinga ezinkampanini zamanzi-liquid phase. Izibonelo zezinqubo ezinjalo ziyi-désulfurization ye-oxidative ne-hydrogen peroxide kanye ne-aluminum solvent extraction noma i-transesterification ebizwa ngokuthi i-base-catalyzed transesterification ye-triglycerides.
Ukwehlisa amandla okulinganiselwe kwesigaba esisodwa esiphendulile kwesinye isigaba esiphendukezelayo kuyinkinga ebalulekile ekusebenzeni kwamakhemikhali emulsion njengoba zombili izigaba zithinta omunye nomunye kuphela phakathi kwe-interphase. Ngaphandle kwe-ultrasonics, lokhu kubangela izinga eliphansi lokuphendula kanye ne-slow conversion kinetics ezinkambini ezimbili zesigaba.
Ukusebenzisa ukufaka nge-reactor ultrasonic, i-cavitation ikhiqiza i-shear ephezulu ye-hydraulic iphinde iphule isigaba esijoqelwe sibe yi-sub-micron ne-nanosize amaconsi. Njengoba indawo ecacile yomngcele wesigaba inethonya eliphakeme lezinga lamakhemikhali lokubhekana nalokhu kunciphisa okuphawulekayo kokuphakama kwe-droplet kuthuthukisa ama-reaction kinetics futhi kunganciphisa noma kuqede isidingo samagciwane okudlulisa isigaba. Iphesenti levolumu yesigaba esijojwe singanciphisa, ngoba ukuthuthwa kwe-emulsions ephansi kudinga ivolumu elingaphansi ukuhlinzekela indawo efanayo yokuxhumana nomunye wesigaba esiphendulelayo.
Ukusetshenziswa kwalokhu kufaka kunganciphisa inani elidingekayo le-ampulhilic emulsion catalysts noma izakhi zokudlulisa isigaba (PTC), njenge-quaternary ammonium usawoti enekhono labo eliyingqayizivele lokuqothula kokubili oketshezi olunomsoco nolwemvelo.
Ukunciphisa iMisa-Ukudluliselwa Kwezenzo Zomkhiqizo
Uma izigaba ezimbili eziphendulayo zisabela kumngcele wesigaba, imikhiqizo yokusabela iqoqa endaweni ye-droplet futhi ivimbele izigaba zesiguquko ekusebenzisaneni ku-interface. I-shear ye-hydraulic eyabangelwa i-cavitation ye-ultrasonic inokuphumela kokugeleza okuphazamisayo nokuthuthwa kwezinto ezivela kumbe kuya ezindaweni zokudonsa phansi futhi iholela ekuhlaleni okuphindaphindiwe nokubunjwa okulandelayo kwamaconsi. Njengoba ukusabela kuqhubeka ngokuhamba kwesikhathi, i-sonication ikhulisa ukuvezwa nokuxhumana kwama-reagents.
Lo mphumela usetshenziselwa izinqubo eziningi, ezifana nokuguqulwa kwamafutha emifino kuya ku-biodiesel noma ukuhlanganiswa kwe-polyesters ngokuguqulwa kwe-diesters ngamadayili ukwenza ama-macromolecules.
Lokhu kufaka kwe-cell cells kuthuthukisa i-emulsification uma kuhlanganiswa iziphuzo ezingenakuqhathaniswa. Lokhu kuholela ezinkampanini ezincane ze-droplet nokusabalalisa usayizi obuncane – isici esiyinhloko sokuzinza kwe-emulsion. Ngalesi sakhiwo ungakwazi ukufaka futhi ukukhipha imishanguzo ephansi ye-viscosity ephansi futhi ephakathi kwamanzi amaningi aphezulu e-viscosity, njengamafutha anamandla kagesi (ama-HFOs), ama-polymers noma ama-gel. Amanye amafomu angadinga ama-emulsifiers noma iziqiniseko ezingeziwe. Kulesi simo kusiza ukuxuba i-emulsifier ngokufanayo. Imiklamo eyenziwe ngokwezifiso yomjovo wezingxenye ezingaphezu kweyodwa kodwa ama-cannulas atholakalayo ngesicelo.
Lokhu kufakazela izinqubo zamanzi eziketshezi ngokukhipha imulsion enesisindo esihle, isib. Isigaba se-solvent esigabeni samafutha. Nakulokhu, lokhu kwandisa ukuxhumana kwesigaba sokuqala futhi kubangele ukukhipha okungcono nokusetshenziswa kwe-solvent.
Ama-Aqua-Amakhemikhali Okushisa Okumsulwa
Amafutha we-grade ophansi we-fuel, njengamafutha asemzimbeni osindayo asetshenziselwa izikebhe zasolwandle noma ukukhiqiza amandla angafakwa emulsified ngamanzi. Lokhu kubangela ukushisa okunekhono nakwehliswa okukhulu kwe-NOx ukukhishwa nokusila.
Funda kabanzi nge-emulsification yama-ultrasonic yamanzi-amafutha (ama-emulsion-fuel)!
Ukumiswa / Sono-Crystallization
Ama-pigment noma ama-nano-particles angakhiwa ngezansi ngokukhuphuka kwezidakamizwa. Kulesi simo, ingxube ye-supersaturated iqala ukwakha izinhlayiya eziqinile noma amakristalu ngaphandle kwezinto ezigxile kakhulu. Lezi zinhlayiyana ziyokhula kuze kube sekugcineni. Ukuze ulawule usayizi wezinhlayiyana / i-crystal kanye ne-morphology, ukulawula ukuxubana kwangaphambili / okusabalalisa kubalulekile.
Ngokuvamile, inqubo yesikhumba ihilela: Ukuxuba, i-supersaturation, i-nucleation, ukukhula kwezinhlayiyana, nokuhlanganiswa. Lezi zinsuku zigwetshwa ngokuhlushwa okuphansi noma ngokumisa ama-agent. Ukuxuba kubalulekile; Ngokuqondene nezinqubo eziningi zokunwetshwa kwejubane ijubane lokuphendula liphakeme kakhulu. I-InsertMPC48 ihlanganisa amajetshi amancane ajoziwe ngokuqinile nge-ultrasonic shear cavitational. Lokhu kwandisa ijubane lokuxuba nokusebenza okwenza izinhlayiya ezincane nezincane.
Ukusabalalisa usayizi wezinhlayiyana ze-Fe3O4 (magnetite) izinhlayiya ezikhiqizwa ekuqhumeni okuqhubekayo kwe-ultrasonic precipitation response (Banert et al., 2004).
I-Hielscher Ultrasonics inikeza imishini yokuhlola, ukuqinisekisa nokusebenzisa lobu buchwepheshe nganoma yisiphi isilinganiso. Umqondo kulula ukufaka izinqubo ezikhona.
Isondlo sesigaba A ekungeneni kokungena kwamanzi ngaphansi kweseli lokugeleza
Isondlo sesigaba B sibe yizikebhe ezincane zokungenwa kwamanzi kagesi eceleni kocingo lokugeleza. Lesi sondlo sizofakwa egumbini lokucwaninga ngamapayipi amahle angu-48
Lungisa ingcindezi yomgibeli usebenzisa i-valve yangemuva yokucindezela esangweni lokungena kwe-cell
Ezingeni eliphezulu le-bench a I-UIP1000hd (1kW) ingakwazi ukucubungula amazinga okugeleza ukusuka ku-100 kuya ku-1000L / hr (25 kuya ku-250 gal / hr) ngenqubo yokubonisa kanye nokwenza ngcono imingcele ye-sonication. Amaprosesa ase-Hielscher ultrasonic aklanyelwe ukulingana okulinganiselwe kuya ekukhuleni okukhudlwana kokuqhutshwa komshini wokushayela noma wokukhiqiza. Ithebula elingezansi libala uhlu lokucubungula nezinsizakusebenza zokuphakanyiswa.
0.2L 0.25 ukuze 2m3/ ihora I-UIP1000hd, I-UIP2000hd
0.2L 1 kuya 8M3/ ihora UIP4000